War YAAB leh oo ka soo baxaya sheekada Barcelona iyo Coutinho!!! – Gool FM
Jose Mourinho oo doortay daafaca ugu fiican adduunka… (Ma Rúben Dias mise Virgil van Dijk?)
Ronald Koeman oo xiddigaha Kooxdiisa Barcelona ku wargeliyey laacibka noqonaya saxiixiisa saddexaad ee weyn oo imaanaya Camp Nou
Manchester United oo dhabar-jab kala kulantay saxiixa Raphael Varane, kaddib markii xiddiga Real Madrid uu doortay kooxdiisa xigta
Liverpool oo u dhaqaaqaysa soo xero-gelinta xiddig ka ciyaara horyaalka Premier League… (Booskee ayuu ka dheelaa?)
War YAAB leh oo ka soo baxaya sheekada Barcelona iyo Coutinho!!!
Byare September 5, 2017
(Europe) 05 Sebt 2017. Waa sax Liverpool way ceshatay Coutinho oo way uga dhaaratay inay Barcelona ka iibiso intii uu furnaa suuqa kala iibsiga balse sheekadoodu weli ma harin.
Warar cusub oo yaab leh ayaa sheegaya in laacibka reer Brazil uu diidi doono inuu Liverpool u ciyaaro kulamada wareega group yada Champions League si uu bisha Janaayo ugu biiro Barcelona isla markaana ugu ciyaaro wareegyada kala baxa.
Jariiradda Sport ee aad ugu dhow Barcelona ayaa sheeganeysa in Coutinho uu ka fikirayo inuusan u ciyaarin Liverpool wareega group yada ee CL.
Haddii uu laacibkii hore ee Inter Milan u safto kooxdiisa Reds kulamada Sevilla, Spartak Moscow ama Maribor, looma ogolaan doono inuu Barcelona u ciyaaro kulamada wareega kala baxa waa haddii uu bisha Janaayo ku soo biiro camaaliqada Spain.
25 jirka ayaa weli rajeynaya inuu xirto maaliyada kooxda reer Catalonia xilli ay Liverpool diiday dalab kasta oo kaga yimaada Barca.
Waxaa la wariyay in Coutinho uu ku hor ooyay xiddigaha xulka Brazil kaddib markii uu ogaaday inay bur burtay riyadii uu ugu dhaqaaqi lahaa Nou Camp intii uu suuqa furnaa, waxaa kaloo xusid mudan inuu warqad codsi ah u gudbiyay Liverpool taa uu kaga tagayo gegada Anfield.
Sikastaba, Coutinho ayaan weli wax kulan ah u ciyaarin kooxda Jurgen Klopp inkastuu u saftay xulkiisa Brazil isla markaana gool u dhaliyay ciyaartii ay 2-0 uga adkaadeen Ecuador isreeb reebka koobka adduunka.
"Isco mise Andres Iniesta" - Sergio Busquets oo diiday in is bar bardhig lagu sameeyo labada laacib
WARBIXIN: 5-ta kooxood ee Premier League oo soo gudbiyay liiska xiddigaha uga qeyb galeya Champions League